knowledge Archives - Newposts
July 4, 2022 newposts2021 0
ပိုက်ဆံစုခြင်းဟာ အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတွေအတွက် အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ပြီး အမြဲတစေမေ့လျော့စေတတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ဝယ်ဖို့အတွက် စုထားတဲ့ငွေလေးတွေ အရံသင့်ရှိနေရင်တော့ တကယ့်ကိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေမစုတတ်သူတွေ ငွေစုပြီး သူဋ္ဌေးဖြစ်ဖို့နဲ့ အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတွေလည်း ငွေစုမိလာစေဖို့ နည်းလမ်းသုံးချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အဆင့်ဆင့်စုဆောင်းမယ် ဒီနည်းလမ်းဟာ တနှစ်သို့မဟုတ် […]
ပျက်စီးနေပြီး အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် ရှားစောင်းလက် ပပ် နဲ့ အုန်းဆီကို ရောသုံးနည်း မိန်းကလေး တွေနူးညံ့ဖြောင့်စင်းတဲ့ ဆံကေသာကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဆံကေသာကို သင့်တော်တဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်တာဟာ ပြီပြည့်စုံပြီး လှပတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာကြောင့် ပါပဲ။ အခုဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ ဆံကေသာ ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းပြီး […]
စကတ်၊ဘောင်းဘီ အတိုဝတ်ချင်ပေမယ့် ဒူးခေါင်းတွေ မည်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက် သဘာဝ အတိုင်းဖြူဝင်းစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ကိုမျှဝေပေး လိုက်ပါတယ် ဒီနည်း လမ်းက100%ထိ ရောက်ပြီး10ရက် အတွင်းမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ကိုရလာ ပါလိမ့်မယ် အဆင့် ၁ သ န့်စင်ခြင်း လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ […]
အရမ်းလှချင်ရင် အရမ်းလိုက်နာသင့်တဲ့အခြေခံနည်းလမ်းမျာ သင်ဟာ အလှအပပညာ ရှင်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါမှာ သူတို့အသားအရေ အတွက် သူတို့ ဘာလုပ်တယ်၊အ ရေပြား အတွက် ဘယ်maskက အကောင်းဆုံးလဲ၊နောက် သူတို့အသားအရေကို အမြဲစိုပြေကျန်းမာနေအောင် ဘလိုထိန်းသိမ်းသလဲ? အစရှိသဖြင့် သူတို့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ အလှအပ ရေးရာလျို့ဝှက်ချက်တွေကို သိလို ကြပါတယ်။ […]
စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်း အချိန်မရွေးကြုံတွေ့လာနိုင်တာကတော့ ဖုန်း မှန်သားပြင် ကွဲသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်တာကြောင့် အသစ် တစ်လုံးနဲ့ ချက်ချင်းလဲဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဖုန်းမှန်ကွဲ နေပေမယ့် ဆက်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ […]
လူတချို့မှာ ထူးဆန်းစွာရှိနေတတ်တဲ့ မွေးရာပါ နားပေါက်လေးတွေ အကြောင်း
လူတချို့မှာ ထူးဆန်းစွာရှိနေတတ်တဲ့ မွေးရာပါ နားပေါက်လေးတွေ အကြောင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံဟာ ထူးဆန်းလွန်းပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ တူညီတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပေးမယ့် တစ်ချို့သောအရာတွေမှာ အနည်းငယ် ကွဲပြားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ လူတစ်ချို့မှာ လက်ပွား၊ ခြေပွားလေးတွေ ရှိနေတာက အကောင်းဆုံး ဥပမာပါ။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ လူတစ်ချို့မှာ ထူးဆန်းစွာရှိနေတတ်တဲ့ […]
အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောက်ျား ဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေစွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တချို့ဘဝ ပျက်မတတ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်…. အမှန်က ပျော်ရမှာပါလက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့် တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ […]
ဘယ်သောအခါမှ မကြီးပွားနိုင်သည့် သား သမီးအမျိုးအစားများ
ဘယ်သောအခါမှ မကြီးပွားနိုင်သည့် သား သမီးအမျိုးအစားများ (၁)မိဘကို အိမ်စောင့်ထားခြင်း။ (၂)မိဘက အဝတ်လျှော်ဖွတ်ပေးရခြင်း။ (၃)မိဘက သား သမီးပြန်လာလျှင် ခြံတံခါးဖွင့်ပေးရခြင်း။ (၄)မိဘကို သား သမီး ထိန်းခိုင်းခြင်း။ (၅)မိဘက ထမင်းချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးရခြင်း။ (၆)မိဘကို လစာပေးသလိုမျိုး ငွေပေးခြင်း။ (၇)မိဘအမှားပြုလျှင် လူရှေ့သူရှေ့ ဆူပူအပြစ်တင်ခြင်း။ […]
မိဘ ခြေရာတောင်းလို သူများအတွက် မိဘ ခြေရာခံယူနည်းလေးပါ
မိဘခြေရာ တောင်းလို သူများအတွက် မိဘခြေရာ ခံယူနည်း။မိဘခြေရာ ခံယူပွဲဆိုတာကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပျောက်ကွယ် လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ယနေ့ခေတ်လူတွေ လုံးဝကိုမသိကြလို့ပါ။ တကယ်တော့ မိဘခြေရာ ခံယူပွဲဆိုတာမြန်မာတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်တာမို့ မြန်မာမိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံး သင့်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနဲ့ ကုံလုံဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့ရဲ့မိဘခြေရာ တောင်းယူပူဇော်နည်းလေးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေး […]
မိသားစုအတွက် ပေးဆပ်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မဆိုတာ….
ကျွန်မက အိမ်ရှင်မ တစ်ဦးပါ။တစ်ရက်အလုပ်ချိန် ၂၄ နာရီ ရှိပါတယ်။ကျွန်မ ကလေးများရဲ့ မိခင်တစ်ဦးပါ။ ဇနီးသည် တစ်ဦးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။သမီးတစ်ဦးဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ချွေးမတစ်ဦး ဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ နာရီ နိူးစက် ဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ထမင်းချက်ဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။အိမ်ဖေါ်မ ဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ဆရာမ ဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ကလေးထိန်းဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ သူနာပြုဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။အထွေထွေ လုပ်သား ဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။သက်တော်စောင့်ဆိုလည်း […]